トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ card Epos olujikelezayo ngetyala | ezifana inzala yikomishoni ukubala, iinkcukacha inkonzo
I-credit olujikelezayo kwekhadi Epos, iinkonzo ezimbini "nkqu utshintsho ribonucleic, xa ribonucleic" ayiyi kubakho. "Utshintsho Ribonucleic" kukuthi, enoba ukhankanye isixa semali okanye izavenge ngexesha yokuthenga, yinkonzo, ezifana njengoko litshintshwe ngetyala esijikelezayo ukususela emva yi le nkqubo. IKhomishini le ngetyala olujikelezayo eya kwamkela kokukokwam, kodwa ngenxa yokuba ingaba isixa intlawulo rhoqo imali ngenyanga, ungenza ukunciphisa umthwalo intlawulo yenyanga.
"nanini ribonucleic" yinkonzo ukuba kusoloko kuba intlawulo credit esijikelezayo. Ngenxa ngokuzenzekelayo icwangcisiwe njengengeniso olujikelezayo ngexesha ukusetyenziswa kwekhadi, awufuni ukwenza inkqubo njengoko "utshintsho ribonucleic". Noko ke, enoba ukhankanye isixa semali okanye ngezavenge, kwinyanga elandelayo amabango kufuneka abe credit olujikelezayo, makhe sinikele ingqalelo kuloo ngongoma.
Ukusebenzisa ezi nkonzo, ngefowuni web site kunye neziko abathengi lwekhadi Epos, kuya kufuneka ukuba makenze le nkqubo.
In ngenyanga ikhadi
Epos ukuba uyakwazi ukutshintsha ixabiso lokuhlawula imali, ukuba usebenzisa i inkonzo ebizwa ngokuba "utshintsho lwezifundo intlawulo ribonucleic", uyakwazi ukutshintsha isicwangciso intlawulo yenyanga. Yaye "indlela eqhelekileyo kunye ikhondo ixesha elide, ikhondo ngqo-umgca" iintlobo ezintathu isicwangciso intlawulo ilungisiwe, ngexesha standard elide Kakade, esi sixa lokuhlawula iya kumiselwa eseleyo. Kule khosi ethe ngqo, iya kumiselwa imali intlawulo yenyanga imali nokuba ngebhalansi (eyi-5, 000 yen).
Ukongeza, ungenza ukwandisa imali lokuhlawula imali, kwaye kwakhona ukuhlawula imali eseleyo kwi ibhetshi ngokupheleleyo. Ukuba kuyenzeka ukuba intlawulo yokuqala, oko kuya kukhokelela ekubeni yokonga ikhomishini imali izinga lenzala.
reference | intlawulo bulk, isixa-mali ukuhlawula olujikelezayo ngetyala kunokwenzeka? Xa
amanqaku Epos kwi ikhadi
Epos, nto leyo okongezeleke kwizivumelwano ukusebenzisa ngetyala olujikelezayo, kuya kunceda uzuze Epos point. Kwimeko intlawulo yemali, nto leyo eya kuba 1 ingongoma enikwa ngamnye yen 200, ukusetyenziswa olujikelezayo ngetyala ka-2 okanye iingongoma Okukhona. Kufuneka kuqatshelwe, iingongoma Epos waqokelela ingasetyenziswa xa sithenga kwi Marui, ungenza buyisela ezahlukahlukeneyo iziqinisekiso isipho.
Ukuba Epos usebenzisa i olujikelezayo umyinge wenzala ikhadi lamatyala ikhomishini
Epos ikhadi, kufuneka ahlawule umrhumo umdla uzimisele. zinga Real yi "15 ekhulwini", lo ngumlinganiselo ixabiso lenani xa kuthelekiswa nezinye ikhadi.
Imali umyinge wenzala, ngokufanayo kwi jikelele ezemali kunye yomboleki yeentengo zemboleko zamakhadi, iye ibalwe i "ukusetyenziswa isixa semali x zinga wokwenene." Umzekelo, usebenzisa 100,000 yen olujikelezayo ngetyala, kwimeko intlawulo xa isixa semali iinyanga ezintandathu, ecaleni "100,000 × 0,15 ÷ 6 = 2,500 yen ', uya kuthabatha umdla Intlawulo izinga yen 2,500 xa zizonke.
reference | nomdla jikelele (ikhomishini) of olujikelezayo ngetyala, amaqondo enzala Kuthatha Imirhumo yen wenzala 500.